30 “Zvino vava kundiseka,+Ivo vaduku kwandiri pamazuva,+Vane vanababa vandaizorambaKuti ndivaise pamwe chete nembwa dzeboka rangu. 2 Kunyange simba remaoko avo—raindibatsirei?Simba rakaparara mavari.+ 3 Havabereki nokuti vanoshayiwa uye vane nzara,Vanon’un’una nzvimbo isina mvura,+Yakanga iine dutu uye yaiparadzwa nezuro. 4 Vaitanha mashizha anovava mumakwenzi,Uye midzi yomuti womutsvairo zvaiva zvokudya zvavo. 5 Vaizodzingwa pakati pevanhu;+Vanhu vaizoshevedzera kwavari sezvavanoita mbavha. 6 Vanofanira kugara panzvimbo dzakatenuka dzemipata ine hova,Mumakomba epanyika nomumatombo. 7 Vaichema vari pakati pemakwenzi;Vaiungana pasi porukato. 8 Ivo vanakomana vebenzi,+ uyewo vanakomana vomunhu asingazivikanwi,Vakadzingwa panyika vachizvamburwa. 9 Zvino vava kuimba nezvangu,+Uye ndava chinhu chinoshorwa kwavari.+ 10 Vanondisema, vanoramba vari kure neni;+Uye havaregi kupfira mate kuchiso changu.+ 11 Nokuti iye akasunungura rukungiso rwangu, akandininipisa,Uye ivo vakasiya matomu akasununguka nokuda kwangu. 12 Vanosimuka kuruoko rwangu rworudyi sevana vakaipa;Vanorega tsoka dzangu,Asi vanoramba vachindikandira zvinodzivisa zvavo zvine njodzi.+ 13 Vanoparadza migwagwa yangu;Vanongowedzera nhamo yangu,+Vasina kana mubatsiri. 14 Vanouya nepakaputsika pakuru;Vanomhanya nomudutu. 15 Zvinongoerekana zvavhundutsa zvaunzwa kwandiri;Kukudzwa kwangu kwadzingwa sezvinoitwa nemhepo,Uye ruponeso rwangu rwapfuura segore. 16 Zvino mweya wangu wadururwa uchibva mandiri;+Mazuva okutambudzika+ andiwira. 17 Usiku mapfupa angu+ anoboorwa odonha achibva pandiri,Uye marwadzo anondin’un’una haambonyarari.+ 18 Nguo yangu inochinja nokuda kwoukuru hwesimba;Inondisunga sekora yenguo yangu refu. 19 Anondiwisira muvhu,Zvokuti ndava seguruva nemadota. 20 Ndinokuchemerai kuti ndibatsirwe, asi imi hamundipinduri;+Ndamira, kuti munditeerere. 21 Munozvichinja kuti mundiitire utsinye;+Munoramba muchindiitira utsinye nesimba rizere roruoko rwenyu. 22 Munondisimudza nemhepo, munoita kuti ndiitasve;Mobva mandinyungudutsa nokutinhira. 23 Nokuti ndinonyatsoziva kuti muchaita kuti ndidzokere kurufu,+Uye kuimba yokusanganira yevanhu vose vapenyu. 24 Asi hapana anotambanudzira ruoko rwake kumurwi wezvakaparadzwa,+Uyewo munhu paanenge achipera haachemeri kubatsirwa pamusoro pezvinhu izvozvo. 25 Ndakasvimha misodzi nokuda kwomunhu akanga achiomerwa nezuva rake;+Mweya wangu wakashungurudzika pamusoro pomurombo.+ 26 Kunyange zvazvo ndakamirira zvakanaka, asi zvakaipa ndizvo zvakauya;+Ndakaramba ndakamirira chiedza, asi rima ndiro rakauya. 27 Ura hwangu hwakaitwa kuti huvire uye hahuna kuramba hwakanyarara;Mazuva okutambudzika akanangana neni. 28 Ndakafamba-famba ndakasuruvara+ pakwakanga kusina chiedza chezuva;Ndakasimuka pakati peungano, ndakaramba ndichichemera kubatsirwa. 29 Ndava hama yehunguhwe,Neshamwari yevanasikana vemhou.+ 30 Ganda rangu rava dema+ uye radonha richibva pandiri,Mapfupa angu apisa nokuda kwokuoma. 31 Rudimbwa rwangu rwangova rwokuchema,Uye mutopota wangu wangova inzwi revanochema.